တူးတူး | Myanmar Mp3 Album | Page 2
တူးတူး – ရင်ခွင်အိုသစ်
၀၁ နောက်မဆုတ်ဘူး ၀၂ သင်္ကြန်မိုးလို့ ပဲခေါ်မယ် ၀၃ အရှုံးပေးလိုက်တော့မယ် ၀၄ ရင်ခွင်အိုသစ် ၀၅ အတွေးနဲ့၀၆ ရင်ခွင်ကိုစိုးမိုးနေဆဲပါ ၀၇ မခွဲနိုင်ဘူး ၀၈ ဘာကြောင့်လဲ ၀၉ စမ်းချင်စမ်းလေ ၁၀ မင်းကိုယ်စားများရှိနေရင် ၁၁ တမ်းတနေတယ် ၁၂ စိတ်ချရမလား ၁၃ မင်းကလွဲလို့၁၄ နိုင်ငံတကာရင်သွေးငယ်များ
September 18, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) တူးတူး4Comments
တူးတူး – ဥပေက္ခာချစ်
၀၁။ ကဗျာဆန်ဆန်ပြောတော့ ၀၂။ ဘာကြောင့်မင်လေးကမုန်းတာလဲ ၀၃။ ဇာတ်ပေါင်းခန်း ၀၄။ အိမ်ရှေ့ကလမင်း ၀၅။ မခိုင် ၀၆။ မလိုပါဘူးကွယ် ၀၇။ အလင်္ကာမျက်ဝန်း ၀၈။ ကြည့်ခွင့်လေးတော့ပေးသင့်ပါတယ် ၀၉။ ပြုံးထားပါလား ၁၀။ ဥပေက္ခာချစ် ၁၁။ တစ်ချိန်ကမိဆိုး ၁၂။ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားလိုက် ၁၃။ ဒုက္ခ ဧည့်သည်မိန်းကလေးမို့၁၄။ အလွမ်းတွေနဲ့ ဝေ ၁၅။ လင်းသောညကြယ်စင်
September 13, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) တူးတူး Leaveacomment
၁။ အသည်း ရက်စက်တယ်……. ၂။ အားငယ် နေ့ ခြေလှမ်း ၃။ ချစ်သော မြန်မာပြည် ၄။ တို့ ဝေး ကြပါစို့ ………. ၅။ ဟေး……..အချစ်…….. ၆။ ကေသရီ…….. ၇။ လမ်းမှန်ကို ရွေး…….. ၈။ မပြောင်းလဲ…နိုင်တဲ့ အချစ် ၉။ မစ…..နဲ့ ကွာ…… ၁၀။ မင်းဘဲ….အပြောကောင်းတယ် ၁၁။ မျက်သွယ်………… ၁၂။ စိမ်းကားနေပြီ………. ၁၃။ သူ……….. ၁၄။ သူငယ်ချင်း………….အတွက် . . သီချင်း လက်ဆောင် . Credit – sayargye
July 14, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တူးတူး Myanmar Artist 10 Comments
ဂန္တ၀င်သုံးဖော် Live Show ၂
၁။ ရာဇ၀င်တွင်မည့်အသည်း – စိုးပိုင် ၂။ သတိရ – ချောစုခင် ၃။ သြော်ချစ်တာကို – တူးတူး+ပြည်မိုး ၄။ ကြားလေသွေးလို့ဝေးရရင် – ဗညားဟန် ၅။ စလယ်ဝင်အိုးလေး – ရတနာဦး ၆။ လိုက်ခဲ့မယ်အချစ်ရေ – နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၇။ နှလုံးသားလက်ဖွဲ့အိမ်အပြန် – ကိုင်ဇာ ၈။ နွဲ့အတွက်သီချင် – ဂရေဟမ် ၉။ မလိုသူတွေမုန်းပါစေ – ပန်းအိဖြူ ၁၀။ အားလုံးကို မပြောပါဘူး – ရှင်မင်းပြည့်
June 4, 2008 mmsong နွဲ့ယဉ်ဝင်း ဗညားဟန် အခွေ (အများ) စိုးပိုင် ဂရေဟမ် ရတနာဦး ချောစုခင် ကိုင်ဇာ တူးတူး4Comments